कोरोनाको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि नै कालोबजारी, सरकार खै ? - Hello Patrika
साउन ३०, काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका वीरगञ्जका डा. निरज सिंहले सामाजिक सञ्जालमै आक्रोश पोखेका छन्, ‘औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गरेर आयात गर्न दिने हो भने रु. ८००० सम्ममा रेमडिसिभिर किनेर बिरामीले आफ्नो ज्यान जोगाउन सक्छन् । यस्तो सानो कुरा पनि वीरगञ्जबाट मैले भन्नुपर्छ ?’ यो सचेत नागरिकको प्रश्न हो । तर सरकारले यसबारेमा आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन ।
‘रेमडिसिभिर’ इन्जेक्सनको विभिन्न देशमा तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल चलिरहेको छ । तर, कोरोना संक्रमणका कारण गम्भीर अवस्थामा रहेकाहरुमा प्रभावकारी देखिएको छ । तर नेपालमा संक्रमण बढ्दै गए पनि जनताको जीउज्यानको सुरक्षा कसरी गर्ने भनेर सरकारले गम्भिरता देखाउन सकेको छैन । यो सरकारमा बस्नेहरुको संवेदनहिनताको उपज हो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गत मेमा जारी गरेको ‘इन्टरिम क्लिनिकल गाइडेन्स फर कोभिड-१९’ मा पनि कोरोना संक्रमितलाई रेमडेसिभिर चलाउन पाइने उल्लेख छ ।
चिकित्सकहरुका अनुसार पछिल्लो समय भेटिएका लक्षण भएका संक्रमित मध्ये कतिपयको स्वास्थ्य जटिल बनेकाले ‘क्रिटिकल केयर’सहित उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । र, उनीहरुको उपचारमा प्रभावकारी हुनसक्ने औषधि रेमडिसिभिर नै हो । सरकारले सहज रुपमा आयात हुन दिए ८ हजारमा पाइने औषधि ४० हजार भन्दा धेरै मूल्य तिरेर कालो बजारबाट किनेर बिरामीको ज्यान बचाउन लागि पर्नु पर्ने कुरा लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको नेपालको राज्य व्यवस्थाको लागि लाजमर्दो कुरा हो भन्ने नेपाल सरकार र स्वनामधन्य नेपालका वरिष्ठ नेताहरुले कैले बुझ्ने हुन् खै ?
नेपालमा सरकार सुशासन दिने कुरामा धेरै कुरामा चुकिरहेको छ । कोरोना महामारीको औषधिको कालोबजारी मौलाउन दिएर अझै सरकारले आफ्नो बचे खुचेको जनविश्वास गुमाउने काम नगरोस् । जनतामा यस्तै कुराहरुले आक्रोश र असन्तुष्ठि बर्ढाईरहृयो भनें सरकारले जनदवावको सामु घुँडा टेक्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । प्रधानमन्त्रीको विकास र सुशासनको नारालाई कोरोनाको प्रभावकारी उपचारका लागि प्रयोगमा आईरहेको ‘रेमडेसिभिर’को मूल्य र कालो बजारीले नगिज्याओस् । (रविराज रिमाल)
सिन्धुपाल्चोकको जुगलमा पहिरो जाँदा १३ घर पुरिए